अब मेसेन्जरमा पठाएका मेसेज डिलिट गर्न सकिने::Leading Digital News Portal Of State7| Political News, Science, Social, Sport, Economy, Business, Entertainment
अब मेसेन्जरमा पठाएका मेसेज डिलिट गर्न सकिने
प्रकाशित मिति : बुधबार, माघ २३, २०७५
दार्चुला । सोसल नेटवर्किङ्ग साइट फेसबुकले अन्ततः प्रयोगकर्ताले व्यग्र रुपमा प्रतीक्षा गरिरहेको निकै कामलाग्ने फिचर लञ्च गरेको छ ।
पत्याउनुहुन्छ ? यी हुन ६० सन्तानका डाक्टर बुवा !
अढाइ महिनादेखी अवरुद्ध कैचुँला टावर सुचारु
धेरै समय मोबाइल चलाउनु स्वास्थ्यको लागि घातक